The Ultimate Guide To Italy kuti Best Yoga Destinations | Save A Train
musha > Rovedza Kufamba Italia > The Ultimate Guide To Italy kuti Best Yoga Destinations
Chimwe chinhu chakanaka kwazvo chine Italy sezvo kuzororo nzvimbo iri kuti haisi chinhu uchingoda muvare bvudzi rako mugomo mazita. Unogona kudzokera Italy zvakare uye zvakare uye vachiri vasina kukwana uyu nyika wakajeka uye ayo richinaka fares, kana emukomana wayo nhoroondo uye tsika nemagariro.
Ndizvo runako ichi chiwanikwa Mediterranean imwe nyika kuti inopa chero mhando kuzororo unogona kufunga. The varipo mutungamiriri ichanyanya pamusoro Italian weyoga dzokugara. asi, kunyange kana uri kuenda nokuda weyoga dzokera shure, zvakaoma nehanya nevamwe Italy kuti zvishamiso.
Zvokudya pachena kuzouya nezvemabatiro kubva Italian chili riri pakati chakanakisisa munyika uye nyika uyewo yakakurumbira nzvimbo wevanoda culinary pazororo. Chiedza gomo munzvimbo pamwe fadza coastlines kuitawo Italy ane mukurumbira rwendo nokuti kuchovha mazororo, tisingatauri nekuchiva kuti surfers zhinji zvinenge nokuti.
Italy vari Glance
mu 2017, munhu Nhoroondo-nepakumedura 60 miriyoni vashanyi akashanyira nyika. Italy ndiyo zvikonzero pazororo yakakurumbira nzvimbo yakadaro nokuda vaviri. Kutanga kwazvose, runako kusvika rimwe nerimwe guta uye nharaunda paivhu Italian iri dzinokatyamadza. Une yemizambiringa akasvibirira ari jeka zvikomo, mukare makomo, uyewo zvakawanda coastlines vane anotyisa Surfing hotspots uye Misha hove fadza, akatendeuka munhoroondo sezvivako.
Achitaura nhoroondo, izvi chaizvoizvo chikonzero chechipiri chinoita Italy rakadaro nzvimbo huru kuenda. nharaunda neimwe, guta uye idiki yazara munhau. Sezvo kutanga pfungwa hweRoma, Italy anogona kunzi munhu mbereko yebudiriro. Kare emakore zvakare akawedzera pavapenyu tsika ounyanzvi uye tsika munyika zvikuru maguta Italian. Muchidimbu, haugoni kuti wakangosuruvara pano.
Chimwe chinhu chikuru pamusoro Italy? Nekuti nyika dzibatane nani kunopera uye kumatunhu vakashanduka zvakawanda kana zvishoma voga, pane cuisines vemo dzakawanda, mumwe Unongova vakasiyana nevamwe. Izvi zvinoreva hausiwe anoravira uye achiedza mberi!
The Best Destinations Kuita Yoga muItaly
Tuscany inoshamisa nharaunda muItaly uye rimwe doro vakatsvaka-pashure kubudikidza vashanyi. Haisi chete nharaunda-chaiyo nyika zvokudya kunoita kuti munhu wose anzwe sokuti vasvika kudenga, zviri vo yakasiyana zvinotyisa uye ndainakidzwa hunhu Kurongwa. Vaduku makomo nemipata pano pave dzinokatyamadza maonero, asiwo zvinyatsoita wineries, izvo Tuscany ane zvakawanda.
saka, haufaniri kuva kushamisika kuona kuti vakawanda jooga dzakachengeteka dziri Tuscany Zvinopawo waini anoravira Tours, kana ivo kunyange kupa jooga uye waini makirasi kubvira pakutanga, tichibatanidza zvakanakisisa zvose nyika. zano My? Enda nokuti! The waini unogona kuravidza pano uye inofadza muruwa Tuscany achava mumwe wenyu zvatinenge pazororo Ndangariro nokusingaperi.
Sardinia ndechimwe nevakawanda munharaunda apo achishanyira Italy, uye nokuda kwechikonzero chakanaka. akasvibirira kwemhenderekedzo Its zvinoita yaanofarira nzvimbo yokuti zvose yogis uye surfers sezvo inopa zvizhinji egungwa zvakanaka, asiwo kunzvimbo zvinoshamisa izvo kufungisisa kana kuita zuva kwaziso.
chitsuwa ichi guru rine anenge 2,000 makiromita kubva yegungwa, asi kure negungwa rinopawo makomo uye zvakawanda Hiking mudungwe munzira, kana izvi zviri pakati zvaunoda. wo, sezvo Chiwi zvinoreva, tawanda ehove nezvokudya zvomugungwa vari zvakawanda pano, saka wako kuravira namabukira achava mukati kuti vaitire.
The Ragusa dunhu iri asi zvakare yaanofarira jooga nzvimbo muItaly uye uyewo surfer kufarira pamwe (sezvo iri riri pachitsuwa kweSisiri). Kubva weyoga pamusoro Beach kumira-up chovha weyoga, unogona kuwana zvose mwoyo wako unoda yoga uye mvura mitambo uye zvose pakati. Mubairo Yoga muna Ragusa zvichaita recharge mabhatiri yenyu, kunyanya kana iwe kushanyako mukupera chirimo kana kwemhepo akakwana uye zuva kupfuura akapfava.
Messina kuna Ragusa Zvitima
Syracuse kuna Ragusa Zvitima
Taormina kuna Ragusa Zvitima
Palerme kuna Ragusa Zvitima
The Amalfi Mahombekombe harisi chete mahombekombe panopinda kuongorora zvinonaka chikafu kana kunakidzwa mvura mitambo zuva rose asiwo kufarira rwendo nokuti yogis pose. The zvinoonekera sekristaro azure mvura uye kamhepo kanofefetera kuti rakanakira rinenge jooga tsika unogona kufunga, kubva zuva kwaziso pakufungisisa zvemusangano uye kunyange kutamba weyoga.
No kushanya kuItaly anogona kurega Rome somunhu navi rwendo pamwe yenyu urongwa. The Trevi Fountain, ari Vatican, yeRoma Forum, ari Sistine Chapel yayo hunoshamisa sirin'i uye yeColosseum vari asi zvishoma fanira varipo munofanira kuona apo ikoko.
Kunyange zvazvo zviri guru, 'The Eternal City' anewo zvakawanda wakagadzikana nzvimbo yakapoteredza, chiri chaizvo nei jooga dzakachengeteka muRoma dzakakurumbira saka.
unyanzvi guta guru munyika, Florence ari munhu rwaifadza kana uchida dzinokatyamadza mamiziyamu uye mukare Ages akitekicha. The Old, dzimba chena uye fadza yakagadzirwa migwagwa achaita kuti unzwe sokuti waita asvika Renaissance hope, riri chaizvo chii Florence zviri. The iconic Dome uye Uffizi Galleries vari asi vaviri nzvimbo zvaunofanira kushanyira kunzwisisa chaizvo nei tsika kuberekwazve Europe akatanga pano pakupera kuMiddle Ages.
Ndine kureurura kuti: pandakashanyira Venice, I Chaizvoizvo sokuti ndinogona kuva misha munhu pano uye kufara (kwete nekurangarira kuti nguva yechando, Zvisinei). Handisi kureva kuti seisingakoshi hondo vanhu pasina pokugara, ehe saizvozvo, asi chete kuti guta iri akanyorova, pasinei kwayo inorema nzvimbo motokari, kuti unzwe norugare pamwe migero yayo yose nguva. Ndainzwa ndaigona kurara pasi pakachena denga pano, pamwe balmy Italian usiku mhepo kumativi pangu Rinofembedza egungwa, kudya scraps zvose veko trattorias kumativi vane, uye kungova saka, saka, kufara.
My Romantic Kufungidzira parutivi, Venice chinongova akanaka uye anofanira-ona paaiva munhu pazororo Italy. Guta wevekare chete zvayo chitsuwa, asi pane zvakawanda weyoga dzakachengeteka dziri Venice kana akapoteredza zvinova dzikaruma mberi kure (munyika itsva chikamu muguta, mhiri zambuko).
Trento kuna Venice Zvitima
Trieste kuna Venice Zvitima
Italy uye Yoga
Yoga abatwa ari kuItaly asi achangobva, sezvo nyika iri kungoramba ari nzvimbo yokugara uye yoga iri kusangana kumutsidzirwa kukurumbira, pose. Sezvo saka vazhinji vashanyi vachiuya Italy vari kutsvaka vamwe unhu unotokonya nguva uye vari zvakare yogis, ndine Yoga dzakachengeteka kuItaly iripo yakanga rinotevera musoro danho.
Nekuti nyika arguably inonyanya kufarirwa kuzororo rwendo muEurope, hazvina basa kuti jooga haana kuva dzakawanda chizvarwa midzi muna Italy. Tsika rakabatwa pamusoro saka nokukurumidza uye zvakanaka zvokuti unogona zvino kuwana jooga dzakachengeteka anenge ose pakona Italy.
Wagadzirira kuongorora Italy? yakanakisisa Website kuti Order Anorovedza Tickets Is Save A Train
Unoda embed yedu Blog pambiru uri paIndaneti, zvino tinya pano: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/guide-italy-yoga/ - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, muchawana yedu rinofarirwa kupfuura chitima pakutengeserana – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml uye iwe unogona kushandura / kuti / of kana / Ave uye mimwe mitauro.
Miriam is an avid world explorer and a yogi. I love exploring world cuisines and reading fiction from all over the world. When I am not busy, I expand my collection of teas and spends some time petting the neighborhood cats. - Unogona baya pano ndibate